Kedu ụbọchị! | Martech Zone
Nwa m nwanyị kpọrọ m oku taa mgbe ọ natara ngwugwu na mail sitere n'aka Jones Soda. Companylọ ọrụ a dị ịtụnanya! Dị ka ekele maka ọrụ m rụrụ na omenala Egwu Jones m Akụrụngwa ọkpụkpọ MP3, Jones zipụrụ ngwungwu ekele. Chaị! O nwere sweatshirt, ụfọdụ akwụkwọ mmado, ụfọdụ akwụkwọ mmado ndị ọzọ, ihe mkpịsị ugodi, egbugbere ọnụ, na ntụtụ !!! Enweghị m ike ikwu maka ụlọ ọrụ a. Gopụ n'ụzọ ha dị otu a na-ekwu ọtụtụ ihe. Na-a Jonesụ Jones Soda !!!
N'ihi ya, m chere na mere n'ezie m ụbọchị… ma ọ bụ naanị mmalite.
N'ịga n'ụgbọala m, otu nwoke sụrụ ngọngọ n'ebe m nọ bụ onye ọbara na-agba n'akụkụ aka nri ya gbadaa obere uwe ya. Ọ gwara m na ọ na-ama mma. M tọgbọ ya n’akụkụ ụzọ ma weta uwe elu ya. Ọ na-agbapụta ọbara site na ọnya mma 2 n'akụkụ ya. Enweghị m ihe ọ bụla iji jide ya, ya mere, m na-agbanye aka na ọnya ndị ahụ ma kpọọ nke ọzọ ndị uwe ojii. Ọ nọ n'oké ụfụ, ọbara nwụkwara ya nke ukwuu. Ndị ọrụ ahụike bịara, e bugara ya ụlọọgwụ. Anọ m na-ejide akụkụ ya maka ezigbo nkeji 20 na ọbara ọgbụgba ahụ kwụsịrị. Otu onye nyere m akwa dị ọcha site n'ụlọ nri.
Onye na-ahụ maka paramedic ahụ gwara ndị uwe ojii na ya nwere ohere 50/50 ịdafe. Aha nwoke ahụ bụ Dale na ọ dị afọ 52. Site na oge m kpochara, echere m na ndị uwe ojii nwere ndị akaebe 2 hụrụ hụrụ mma ha hụrụ mma ahụ. Amaghị m otu esi achọpụta ma Dale mere ya, n'agbanyeghị. Kpee ekpere maka Dale.
Ya mere… otu ụbọchị! Obi dị m ezigbo ụtọ na m nọ n’ebe kwesịrị ekwesị n’oge kwesịrị ekwesị. Enwere naanị otu nwoke ọzọ nke mụ na ya nọ mgbe m jidere Dale n'akụkụ na onye na-akwa iko nke nyere m akwa dị ọcha. Nke ahụ bụ obere nsogbu na ndị dị otú ahụ a na-arụsi ọrụ ike n'akụkụ Indianapolis. M na-eji ụkwụ na-aga n’okporo ụzọ ahụ kwa ụbọchị ma na-esi n’ụgbọala m pụọ.
Kpee ekpere maka Dale!
Mmelite: Lee Akụkọ ndị uwe ojii.